Abakhiqizi & Abahlinzeki Bephaneli Yelanga Lelanga China Isigamu-Cell Solar Panel Factory
Iphaneli yami ye-SOLAR M3 Half Cell Solar Pv Panel 5bb 6bb 9bb 390w 395watt 400wp 405 Watt 410 w Perc Solar Pv Module
EZIPHUMA EZISEMQOKA 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwepheshe obusha ukwenza ngcono ukusebenza kwamamojula, inikeze ukubukeka okuhle kobuhle, ikwenze kube lula ukufakwa kophahla. Ukusebenza okuphezulu Ukusebenza kahle kwemodyuli ephezulu (kufika ku-20.38%) kusizakala kusakhiwo sesigamu seseli (isici sokumelana okuphansi). I-PID Resistance Excellent Anti-PID yokusebenza isiqinisekiso sokuncipha kokuncipha kwamandla okukhiqiza ngobuningi. Ukusebenza okuphansi kokukhanya Ingilazi ephakeme neseli ebusweni te ...
Iphaneli yami ye-SOLAR M6 Half Cell Solar Pv Panel 5bb 6bb 9bb 430w 435watt 440wp 445 Watt 450 w 455 w Perc Solar Pv Module
EZIPHUMA EZISEMQOKA 6/9/12 Busbar Solar Cell 6/9/12 busbar solar cell isebenzisa ubuchwepheshe obusha ukwenza ngcono ukusebenza kwamamojula, inikeze ukubukeka okuhle kobuhle, ikwenze kube nhle ukufakwa kophahla. Ukusebenza okuphezulu Ukusebenza kahle kwemodyuli ephezulu (kufika ku-20.38%) kusizakala kusakhiwo sesigamu seseli (isici sokumelana okuphansi). I-PID Resistance Excellent Anti-PID yokusebenza isiqinisekiso sokuncipha kokuncipha kwamandla okukhiqiza ngobuningi. Ukusebenza okuphansi kokukhanya Ingilazi ethuthukile nengaphezulu leseli ...
I-MY SOLAR M3 Half 120 Amaseli Solar Pv Panel 5bb 6bb 9bb 325w 330watt 335wp 340 Watt 345 w Perc Solar Pv Module
EZIPHUMA EZISEMQOKA 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwepheshe obusha ukwenza ngcono ukusebenza kwamamojula, inikeze ukubukeka okuhle kobuhle, ikwenze kube lula ukufakwa kophahla. Ukusebenza okuphezulu Ukusebenza kahle kwemodyuli ephezulu (kufika ku-20.45%) kusizakala kusakhiwo sesigamu seseli (isici sokumelana okuphansi). I-PID Resistance Excellent Anti-PID yokusebenza isiqinisekiso sokuncipha kokuncipha kwamandla okukhiqiza ngobuningi. Ukusebenza okuphansi kokukhanya Ingilazi ephakeme neseli ebusweni t ...